Thermostatic ịsa ahụ Mgbata | Thermostatic ịsa igwekota | Thermostatic ịsa ahụ na kọlụm - ARCORA INC
Welcome / Wụsara kọlụm / bathtub fosets / ARCORA Wall na-etinye igwekota igwe ihe na-ekpo ọkụ na mmiri oyi
3090300C Thermostatic akara, mụ mmiri okpomọkụ na mgbochi skal nchekwa shutdown.
Ngwongwo ọla siri ike, na-achọpụta ogo na ogologo ndụ.
Ntapu-free katrij maka ezigbo, na-adịgide adịgide ọrụ.
Ọgwụgwụ chrome na-egosipụta nke ọma maka anya enyo nke dabara ụdị ọ bụla eji achọ mma.
-Ihe nke ọkpọkọ ọkpọ: ọla siri ike
nke aka: abuo
- Ọnụ ọgụgụ nke oghere: abụọ -Ọgwụgwụ
-Ntuziaka: ntinye mgbidi
Thermostatic ịsa ahụ foset Ajụjụ si
Arcora ọ na-ere mgbidi igwe agwakọtara igwe?
Eeh, ọ bụrụ na ị na-achọ igwe igwe igwe ihe kachasị mma, ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị. Na Arcora, anyị na-ere ihe kachasị mma igwe na-agwakọta igwe, na ọnụego nke na-agaghị akpaghasị ego gị niile.
Ebee ka m ga-ahụ igwe igwe igwe igwe igwe mma mma kachasị mma?
Arcora bụ otu n'ime ebe kachasị mma ịchọta igwe kachasị mma igwekota igwe na ntanetị na ntanetị. Igwe mmiri ịsa ahụ anyị bụ nke ọla siri ike iji mee ka ọ dị ogologo na ịdị mma; anyị na-agbasi mbọ ike inye ndị ahịa anyị ngwaahịa kacha mma ka ha wee ghara ịnagide nsogbu ọ bụla.
Arcora ọ na-ere igwekota igwe na-ekpo ọkụ na njedebe Chrome?
Ee, na Arcora anyị na-ere igwekota igwe na-ekpo ọkụ na chrome iji mee ka ị metụta klaasị gị. Ọ bụghị naanị na ha dị mma, mana ha dịkwa mma iji mee ka ogologo ndụ ha dịkwuo elu.
Ihe ọkpọ mmiri a na-ekpo ọkụ nwere ike dakọtara aesthetics nke ime ụlọ ịwụ ahụ m?
The Arcora thermostatic foset na chrome imecha na-enye a mirror akụkụ nke ọkpọkọ na kwekọrọ enweghị nsogbu na ụdị ọ bụla nke ime. Ma mabul gbara ọchịchịrị ma ọ bụ marble dị mfe, obere ma ọ bụ nnukwu, agbanyeghị ụdị ime ma ọ bụ nha ụlọ ịsa ahụ gị, foset na-ekpo ọkụ Arcora na ngwụcha chrome ga-adabara ọ bụla kachasị mma.
Ebee ka Arcora na-ebuga ma ogologo oge ole ka ọ na-ewe?
Site na ọrụ nnyefe anyị ngwa ngwa, na Arcora anyị na-ebugharị ngwugwu anyị n'ụwa niile na enweghị ebubo mbupu ma hụ na ndị ahịa anyị niile natara ngwa ahịa ha ngwa ngwa.